भारतले निहुँ खोजिरहँदा चीनले दियो नेपाललाई बलियो साथ, दिल्लीमा खैलाबैला
काठमाडौं । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा दावी गरेर नेपालसँग निहुँ खोजिरहेका बेला चीनले बलियो साथ देखाएको छ। सीमा विवादले नेपालसँग औपचारिक बोलचाल तथा वार्ता नै बन्द गरेको भारतका लागि
काठमाडौं। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछोड्ने बताएका छन्। बुधवार भैसीपाटीस्थित निवासमा आफूलाई भेट्न आएका युवा नेताहरु रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरे, डा. दीपकप्रकाश भट्ट,
वामदेवले असफल पारिदिए प्रचण्ड-नेपालको षडयन्त्रको तानाबाना, पत्नीसहित ओली पुगे भैँसेपाटी
काठमाडौं। आज विहान जति बेला प्रचण्ड र नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनेगरी स्थायी कमिटी बैठको तयारी गर्दै थियो त्यतिखेरै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। प्रतिनिधिसभाको अहिलेको
भीम रावलले छाडे प्रचण्डको साथ, कड्किँदै भने: तपाईहरुको पदको लडाईंमा हामीलाई नगन्नू
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता भीम रावलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ छोडेका छन्। मंगलवार प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकमा रावलले यसको छनक दिएका
ओली सरकारको एक्सनले डरायो भारत, दार्चुलाका सिडिओ भन्छन्: कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो बलियो उपस्थितिले भारतीयहरु आत्तिए
काठमाडौं । भारतको दादागिरीविरुद्ध इतिहासमै पहिलोपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाईको बलियो सरकार मैदानमा उत्रिएको छ। भारतका सबै रणनीतिलाई ओलीले फेल पारिदिएका छन्। अब त यस्तो भइसक्यो कि भारत हगुल्टोले
रातारात सरकारको बोल्ड निर्णय, प्रहरीदेखि खेलकुदसम्म हलचल!
काठमाडौं । सरकारले डिआइजीद्वय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको छ। सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डीआईजीद्वय शाही र कार्कीलाई बढुवा गरेर एआईजी बनाएको
उपत्यकामै मृत्यु भयो कोरोनाबाट एक जनाको, ज्यान गुमाउने पुगे ५ जना
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट काठमाडौं उपत्यकामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। उपत्यकाको किष्ट मेडिकल कलेजको आइसीयुमा उपचाररत ललितपुर वडा नम्बर २२ निवासी ५७ वर्षीय वृद्धको आज साँझ मृत्यु भएको हो।
काठमाडौं । मित्र राष्ट्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपाल भारत विवादबारे मुख खोलेका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सीमा विवादलाई लिएर नेपाल र भारतबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समय माग्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकिएपछि युवा नेता गगन थापा नेतृत्वप्रति आक्रोशित बनेका छन्। थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय नगरे पनि आफूहरु कांग्रेसका सांसदहरु